एसियाडमा नेपाल सहभागी खेलहरु- २ - BBC News नेपाली
एसियाडमा नेपाल सहभागी खेलहरु- २
20 सेप्टेम्बर 2014
दक्षिण कोरियाली शहर इन्चोनलाई १७ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको रंगले छोइसकेको छ। ४५ देशका १३ हजार भन्दा बढी खेलाडी पदाधिकारीहरु इन्चोन पुगिसकेका छन्।
प्रतियोगितामा ३६ खेलका ४३९ इभेन्ट्सहरुमा नेपालले यसपाली २५ खेलमा सहभागिता जनाइरहेको छ।
दुई हप्ता लामो एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो टोली हो।
सन् १९५१ को पहिलो एसियाली खेलकुदबाट खेल्दै आएको नेपालले यसपाली खेल्ने खेलहरुको विवरण यसप्रकार छ।
समुहगत खेलमा नेपालले एसियाली खेलकुदमा कमैमात्र सहभागिता जनाउने गर्दछ। फुटबलले पनि १६ वर्षपछि एसियाली खेलकुदमा सहभागि हुंदैछ । सन् १९९८ मा थाइल्याण्डको बैंककमा भएको १३ औं एसियाली खेलकुदमा भाग लिएपछि नेपाली फुटबलले एसियाडमा सहभागिता जनाएको थिएन ।
समुहगत खेलमा लाग्ने ठुलो खर्च र एसियाका ठूला प्रतिद्धन्दीहरुसंगको कठिन चुनौतीका कारण फुटबल जस्तै अन्य समुहगत खेलहरुको सहभागितामा नेपालले कम प्राथमिकता दिंदे आएको इतिहासका कारण पनि फुटबल अनुपस्थित रहेको कतिपयको भनाई छ।
तर लामो समयपछि अहिले फुटबल जुर्मुरायो । नेपालमे भएको साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी सेमिफाइनल सम्म पुगेको नेपालले आगामी साग फुटबललाई मध्यनजर गरी एसियाडमा सहभागिता जनाएको संघले जनाएको छ ।
इन्चोन जानु अगाडी तयारीको लागि नेपाली यु २३ टोलीले बंगलादेशमा दुईवटा मैत्रीपुर्ण खैल खेलेको थियो । तर नेपाल एसियाडको समुह डी समुहमा पर्यो , जहां नेपालले जापान, कुवेत र इराक विरुद्ध विरुद्ध खेलेको थियो ।
समुहको सम्पुर्ण खेलमा पराजित भइ टोलीले अघिल्लो चरणमा भने प्रवेश पाउन सकेनन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाले एसियाली खेलकुद नेपाली फुटबलको लागि राम्रो एक्सपोजर हुने बताएका छन् । उनले भने – भोलीका दिनमा साग तयारीको लागि यसले मदत गर्नेछ। टोली थप मजबुत हुनेछ ।
एसियाली खेलकुदमा भाग नलिएपनि एसियाली फुटबल महासंघको सी श्रेणिका सवै प्रतियोगिताहरुमा नियमित सहभागिता जनाउदै आएको छ । त्यसैले टोलीको समिकरण र टिम वर्क निकै राम्रो रहेको बताउछन् नेपाली प्रशिक्षक ज्याक स्टेफानोस्कि।
पछिल्लो समय नेपालले दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धामा प्रभावकारी प्रदर्शन गर्र्द वरीयताकौ उच्च विन्दुमा समेत पुग्न सफल भएको थियो ।
सन् २००२ मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको १४ औं एसियाली खेलकुदबाट नेपाली गल्फरहरुले एसियाली खेलकुदमा खेल्न थालेको हो । १६ वर्षपछि नेपाली टोली फेरी एकपटक कोरियाकै अर्को शहर इन्चोनमा एसियाली खेलकुदमा भाग लिन आइपुगेको छ ।
इन्चोन एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने उदेश्य लिई गल्फले विशेष खालको तयारी समेत गरेको थियो विगत तीन वर्ष देखि । एसियाडलाई नै लक्षित गरेर गल्फ संघले सुर्य नेपाल प्रालिसंग मिलेर सुर्य नेपाल एनजीए युथ गल्फ कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । देश भरका ५० जना युवा खेलाडीलाई राखेर प्रारम्भिक प्रशिक्षण थालेको सो परियोजनाले विभिन्न चरणबाट खेलाडी छान्दै अन्तिम २ खेलाडी दिनेश प्रजापति र विष्णु शर्मा छानिएका हुन् । टंक बहादुर कार्की र टासी छिरिङ भने एसियाडको छनोट प्रतियोगिता जितेका हुन् । टोलीको मेनेजरमा सीवी भण्डारी छन् ।
कोरिया पुग्नु अगाडी गल्फ टोलीले थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियामा विशेष प्रशिक्षण लिएका छन् । खेलाडीहरुले सेप्टेम्वरको दुई साता थाइल्याण्डमा र त्यसपछिको १० दिन कोरियाको नामसोल कन्ट्रि क्लवमा विशेष प्रशिक्षण लिएका थिए । बैककको प्रशिक्षणका दौरान यी खेलाडीहरुले त्यहा सेप्टेम्वर ७ देखि १२ तारिखसम्म भएको थाइल्याण्ड ओपन गल्फ प्रतियोगितामा पनि भाग लिएका थिए ।
नेपाललाई गल्फको एउटा सुन्दर गन्तब्य मानिन्छ । यहांका खेलाडीहरु पनि त्यतिकै अब्बल छन् भनेर एसियाडमा देखाउने नेपाल गल्फ संघका महासचिव टासी घले बताउछन् । कोरियाको प्रदर्शन नेपाली गल्फको परिक्षा हुने पनि उनले बताए ।
एसियाली खेलकुद नेपाली जिम्न्यास्टिक्सको लागि संधै उर्जा हुने गर्दछ । यो उर्जा इन्चोनमा पनि प्राप्त हुने विश्वास खेलाडीहरको छ ।
विश्व जिम्न्यास्टिक्सकै शक्तिशाली देश चीनको छिमेकी देश भएरपनि नेपालको जिम्न्यास्टिक्सकोले ठुलो आकार लिन सकेको इतिहास छैन । नेपाली खेलाडीहरुले एसियाली स्तरमा कुनै तहल्का मच्चाउने प्रदर्शन गरेको इतिहास छैन , न त इन्चोनबाट नै त्यस्तो कुनै लक्ष्य राखिएको छ । केहि सिमित स्कुल र क्लबहरुमा रहेका खेलाडीहरुले जिम्न्यास्टिक्सका सुन्दर कलालाई भने बाचय राखेका छन् ।
यसपाली जिम्न्यास्टिकमा दुई खेलाडीहरु कविन राज श्रेष्ठ र निशान सिंखडाले सहभागिता जनाउदैछन् । यी खेलाडीले फलोर (ायियच० र भल्ट (खयगति ) मा गरी दुई इभेन्टसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रशिक्षक श्रीराम नकर्मीले उनीहरुलाई तयार बनाइरहेका छन् ।
प्र्रशिक्षक श्रीराम नकर्मी भन्छन् – हाम्रा खेलाडीहरुले एसियाडमा चीन , जापान , काजकिस्तान , कोरिया जस्ता राष्ट्रहरुका खेलाडीहरुले देखाएको खेल प्रत्यक्ष हेरेर उर्जा लिने हो ।
नेपाली जिम्न्यास्टिक खेलाडीहरको एसियाड सहभागितामा पनि निरन्तरता छैन । ९० को दशकदेखि भाग लिन थालेको नेपालले सहभागिता टुटाउदै आएको छ । गत ग्वाङजाउ एसियाडपछि इन्चोन भने निरन्तर सहभागिता हो ।
जुडो नेपालको सकृय खेलमध्येको एकमा पर्छ । मार्शल आट्सको यो इभेन्ट्सले दक्षिण एसियाली खेलकुद साग गेम्समा संधै पदकको दावी गर्ने गर्छ । तर एसियाका शक्ति राष्ट्रहरु माझ भने यसले चुनौती दिन सकिरहेको छैन ।
यसपाली त्यो शाहस गर्न सक्छ त खेलाडीहरुले ? १९८६ मा खेलाडीका रुपमा एसियाड खेलेका वर्तमान प्रशिक्षक ऋषिराम प्रधान भन्छन् – खेलाडीहरु उच्च फर्ममा छन् । तर एसियाडमा नेपालले पदक जित्नलाई भाग्य नै चाहिन्छ । सोचे जस्तो टाइसिट बनेमा त्यो सम्भव पनि छ ।
मिशन सागको नाममा जुडो खेलाडीहरुले निरन्तर दुई वर्षदेखि प्रशिक्षण पाइरहेको हुनाले खेलाडीहरु अहिले उत्साहित देखिएका छन् । इन्चोन जानु अगाडी नम्वर एक खेलाडी सरोज महर्जन र महिला लिला अधिकारी रसियामा भएको विश्व च्याम्पियनसिप खेलेर फर्केका छन् । एसियाडका प्रशिक्षक विरेन्द्र रञ्जितका अनुसार खेलाडीहरुको मनोबल उच्च छ । प्रतिद्धन्दीहरुले तारिफ गर्नेछ हाम्रो ।
एसियाका राष्ट्रहरु जापान, कोरिया, इरान, मंगोलिया, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रमाझ छाप छोड्ने विश्वासमा छन् उनी । उनका अनुसार जुडो खेलाडीहरुलाई विदेश प्रशिक्षणमा पठाउन सकेको भए अझ स्थिति राम्रो हुन सक्थ्यो ।
जुडो नेपालमा महंगो खेलमा पर्छ । यो खेल सकृय भएरपनि यसमा खेलाडीहरुको सख्या भने ज्यादै वढ्न सकेको छैन । नेपाल पुलिस यो खेललाई सकृय बनाउने आधार शुरु देखि नै बन्दै आएको थियो । पुलिसमै अहिले नेपालमा राम्रा खेलाडीहरु छन् । नेपालले यसपाली इन्चोनमा ७ खेलाडीले ७ वटा तौल समुहमा भाग लिंदैछन् ।
इन्चोन जानु अगाडी सम्मपनि खेलाडी सहभागितामा अन्योल रहनु नेपाली करातेको दुर्भाग्य मानिएको छ ।
नेपालमा दुईवटा कराते महासंघ विद्यमान हुनु र दुवैले आ आफनो खेलाडीहरु एसियाडका लागि दर्ता गराउनुले कराते पदाधिकारीहरुमा विवाद र खेलाडीहरुमा अन्योलता छाएको हो ।
यो विवादको अन्त्य अझै भइनसकेको पदाधिकारी बताउछन् । एसियाडमा दुवै संघले ८ जना खेलाडी दर्ता गराएका छन् । दशरथ रंगशालामा खेलाडीहरुलाई गत दुईवर्ष देखि नियमित प्रशिक्षण गराउदै आएका प्रशिक्षक दिपक श्रेष्ठ भन्छन् – लक्ष्य पदक हो , तर विवादले खेलाडीहरुको मनोबल घट्न पुगेको छ ।
नेपाल मार्शल आट्रसको एउटा राम्रो राष्ट्रमा गनिन्छ । यद्यपी नेपाली खेलाडीहरुले दक्षिण एसियाको सिमा नाघेर एसियाली स्तरमा पदक जित्न संधै संघर्ष गरिरहेको इतिहास छ ।
सन् १९९८ को १३ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालका समर बहादुर गोलेले करातेबाट काश्य पदक प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछिको १६ वर्षको विच नेपाली कराते पदक विहिन हुंदै आइरहेको छ ।
नेपाली खेलाडी दिवस श्रेष्ठ एसियाडको उच्च चुनौती आफनो खेल जीवनको लागि निकै महत्वपुर्ण हुने बताउछन् । उनले भने – एसियन गेम्समा मेडल जित्ने हाम्रो लक्ष्य हो । र मलाई विश्वास छ , एसियाडको अनुभवले आगामी वर्ष हुने साग गेम्समा हामीलाई पदक जित्न थप मदत पुग्नेछ ।
१४. लन टेनिस
एक समय निकै निस्कृय बनेको लन टेनिसले चारवर्ष अगाडी चीनको ग्वाङझाउमा भएको १६ औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएपछि लयमा फर्किएको छ ।
सन् १९९० पछि लन टेनिसले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएको थिएन । त्यसको २० वर्षपछि ग्वान्झाउमा टिमले भाग लिएको थियो । त्यतिबेला जम्मा चार जना खेलाडीहरुले भाग लिएपनि महिला खेलाडीहरु प्रतियोगिताको दोस्रो चरणसम्म पुग्न सफल भएको थियो । महिला खेलाडीहरुको त्यो पहिलो एसियाड सहभागिता समेत थियो ।
नेपाली टोलीका प्रशिक्षक सुर्य भुषण वज्राचार्य भन्छन् – यसपाली इन्चोनमा त्यो भन्दा राम्रो गर्ने योजनामा छन् खेलाडीहरु । हामीसंग अनुभवी र युवा टोलीको समिश्रण छ । त्यसैले युवाहरुको सहभागिताले उनीहरु भविष्यका लागि राम्रो हुन सक्नेछ।
इन्चोनमा नेपालले महिला र पुरुष गरी १२ खेलाडीहरुको पुर्ण टोलीले भाग लिदैछन् । पुर्ण टोली जान लागेको यो पहिलो पटक समेत हो । टोलीले सिंगल्स, डबल्स, टिम इभेन्ट्स र मिक्स डबल्समा कुल ७ इभेन्ट्समा सहभागिता जनाउनेछन् ।
एसियाडमा लन टेनिसको ठुलो लक्ष्य छैन । जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाइल्याण्ड र भारत जस्ता पदकका दावेदारहरुका माझ नेपालले ठुलो उथलपुथल मच्चाउन सक्दैन । तर प्रशिक्षक सुर्यभुषण बज्राचार्य भन्छन् – केही नया अनुभव खेलाडीहरुले प्राप्त गर्नेछन् । एसियाड नेपालको लागि ठुलो पाठशाला हुनेछ ।
नेपाल लन टेनिस संघका उपाध्यक्ष ज्योती राणाले प्रतियोगितामा नेपालको फुल टिम बनाउन निकै मेहनत गरेको बताए । उनले भने – नेपाली लन टेनिस विस्तारै प्रगती गर्ने क्रममा छ । भोलीका दिनमा यी खेलाडीहरुले नतिजा दिने मलाई विश्वास छ ।
१५. सेपाक ताक्रो
एसियाली खेलकुदमा पछिल्लो समय प्रवेश पाएको खेल सेपाकताक्रोमा नेपाल कान्छो सदस्य राष्ट्र हो । इ्रन्चोन एसियाली खेलकुदमा नेपालले पहिलो पटक भाग लिंदैछ । तर टोलीको आत्मविश्वास भने उचो देखिएको छ ।
सेपाकताक्रोमा नेपालको इतिहास लामो छैन । तर छोटो समयमा नेपालले केही मुख्य प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाइसकेको छ भने नेपालमै दक्षिण एसियाली स्तरको प्रतियोगिताको आयोजना समेत गरिसकेको छ । ५ राष्ट्रले भाग लिएको सो प्रतियोगितामा नेपालले दोस्रो स्थान समेत हात पारेको थियो ।
यसै वर्ष सन् २०१४ को अगस्टमामा थाइल्याण्डमा भएको २९ औं किंग्स कप सेपाकताक्रोमा नेपालले डबल्स इभेन्ट्समा काश्य पदक जितेपछि टोलीको मनोबल झन उच्च भएको देखिन्छ ।
सो पदक जितेपछि नेपाल डिभिजन २ बाट डिभिजन १ मा वढुवा भएको छ । नेपाल सेपाकताक्रो संघका प्रशिक्षक तथा संघका महासचिव समेत रहेका नेत्र बहादुर गुरुङ भन्छन् – एसियाली स्तरमा हाम्रा खेलाडीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न लायक भइसकेको छ। त्यसैले एसियाड हाम्रो लागि ठुलो स्तर परिक्षा बन्नेछ ।
सेपाकताक्रोको पावर हाउस राष्ट्र थाइल्याण्ड हो । त्यसपछि दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, चनि र म्यानमार जस्ता राष्ट्रहरु सेपाकताक्रोमा बलिया मानिन्छ ।
इन्चोनमा नेपालबाट चार खेलाडीले सहभागिता जनाउदैछन । यिनीहरुले रेगु र डबल्स गरी दुई इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपाल सेपाकताक्रो संघका सस्थापक अध्यक्ष सिताराम मास्के दक्षिण एसियामा नेपालको भविष्य राम्रो हुने विश्वास गरेका छन् ।
सातदोबाटोमा शुटिङको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेञ्ज छ , तर शुटिङको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको पहुच भने टाढा नै देखिने गरेको छ ।
एसियाडमा नियमित सहभागिता रहंदै आएको शुटिङले यसपाली पनि सहभागिताको पुराने उदेश्य पुरा गर्ने प्रयास गर्नेछ । उनीहरुको उदेश्य छ ओलम्पिक खेलमा छनोट हुन आवश्यक स्कोर बनाउने ।
कोरियाली प्रशिक्षक ह्वान इन क्वोनको विशेष प्रशिक्षणमा शुटिङले अन्तिम समयमा एसियाली खेलकुदका लािग विशेष तयारी गर्ने अवसर पाएको छ । चार नेपाली खेलाडीहरु इन्चोन एसियाडका लागि छानिएका छन् । तिनीहरुमा तीन जना महिला स्नेहा राणा, फुलमाया क्याप्छाकी र अस्मिता राई छन् । यी तिनै महिलाहरुले १० मिटर एयर राइफलमा भाग लिनेछन् भने एक पुरुष के बी पुनले १० मिटर एयर पेस्टोलमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
एमक्युएस गर्न सके आगामी ओलम्पिक प्रतियोगितामा वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुने गर्छन् । एसियाली खेलकुद र एसियन शुटिङ च्याम्पियनसिप जस्ता प्रतियोगिताहरु शुटिङको ओलम्पिकको छनोटको आधार हो । १० मिटर एयर राइफलमा ४०० पुर्णाङकमा ३७५ एमक्युएस हो भने १० मिटर एयर पेस्टोलको ६०० पुर्णाङमा ५६३ एमक्युएस हो ।
कोरियाली प्रशिक्षक क्वोनले नेपाली खेलाडीहरुले प्राप्त सुविधाका आधारमा राम्रो तयारी गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालले एसियाली स्तरमा पदक जित्न धेरै विषयहरुमा सुधार गर्न बांकी छ , अहिलेको सुविधा अनुसार नेपालले वाइल्ड कार्डसम्म प्रयास गर्ने हो ।
१७. सफ्ट टेनिस
नेपाली सफ्ट टेनिसको एसियाली सहभागिताको इतिहास निकै राम्रो छ । सन् १९९४ मा जापानको हिरोशिमामा भएको एसियाडमा पुरुषको टिम इभेन्ट्समा नेपालले छैटौं स्थान प्राप्त गरेको थियो ।
उत्कृष्ट ६ मा परेर डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाएको सो एसियाडका खेलाडीहरु विकास पाण्डे, सञ्जय नेपाल, अच्युत श्रेष्ठ, विश्वास बस्नेत र अशोक सिंह हुन् ।
त्यसपछि पनि नेपालले अर्को दुई पटक प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको छ । सन् २००६ मा कतारको दोहामा भएको एसियाडमापनि मेन्स टिम इभेन्ट्स क्वार्टर फाइलनमा पुगेको थियो ।
प्रतियोगिताको गत ग्वान्झाउ सस्करणमा नेपालका मनोज सुब्बा आफनो समुहमा प्रथम हुंदै पुरुष एकलको क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भए । एसियाका उत्कृष्ट राष्ट्रहरु विचको यो प्रतिस्पर्धामा अन्तिम आठ सम्म प्रवेश गर्न सफल हुनु सफट टेनिसको सफलतामा पर्छ ।
इन्चोन एसियाडमा नेपाली सफ्ट टेनिसले महिला ५ र पुरुष ५ गरी पुर्ण टोलीले सहभागिता जनाउदैछ । महिलाको फुल टिम सहभागिता हुन लागेको सन् १९९० पछि यो पहिलो हो । नेपाली टोलीले इन्चोनमा पुरुष र महिलाको एकल, टिम इभेन्टस र डबल्स तथा मिक्स डबल्स गरी ७ वटा इभेन्ट्समा प्र्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपाल सफ्ट टेनिस संघका अध्यक्ष विनय शाह भन्छन् – सफ्ट टेनिसमा नेपाली खेलाडीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रगती गर्न सक्छ भन्ने कुरा बारम्वार पुष्टि गरिसकेका छन् । तर हामीले नेपालमा यसलाई अझ राम्ररी हुर्काउन सकिरहेका छैनौं । यो एसियाड पनि खेलाडीहरको स्तर परिक्षा हुनेछ ।
एसियाली खेलकुदमा पौडीको लक्ष्य संधै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने रहने गरेको छ । यसपाली पनि लक्ष्य त्यहि हो । उत्कृष्ट क्षमता देखाउदै आएका शिरिष गुरुङले भर्खरै काठमाडौंमा भएको प्रतियोगितामा १०० मिटर फ्रि स्टाइलमा २५ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय किर्तिमान भंग गरेका थिए । उनले त्यही कीर्तिमानमा थप सुधारगरी त्यसलाई दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने लक्ष्य बनाएको छ ।
शिरिषले भर्खरै १०० मिटर फ्रि स्टाइल ५८.५७ सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए । साग गेम्समा ५४ सेकेन्डमा लक्ष्य राखे पदक जित्ने नेपाल पौडी संघको अनुमान छ । संघका महासचिव जगतमान श्रेष्ठ भन्छन् –एसियाडमा उनले १ सेकेन्ड चाँडो पुरा गर्न सके हामी सागको तयारीमा अझ सहजसंग लाग्नेछौं । एसियाडपछि नियमित प्रशिक्षण राखे सागमा नया कीर्तिमान बन्न सक्नेछ । साग गेम्समा नेपाली पौडी टोलीले स्वर्ण पदक जितेको इतिहास छ । तर ब्यक्तिगत विधामा नेपाल अझै इतिहास रच्नै बाकी छ । महासचिव श्रेष्ठले सोफियाले पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सक्ने विश्वास प्रकट गरे ।
एसियाका महाशक्ति राष्ट्रहरु विचको भीडन्तमा नेपाल पौडीको एउटा फुच्चे राष्ट्र मात्र हो । एउटा हिटिङ पुल समेत नभएको नेपालमा पौडीले जुन रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय पौडीमा नियमित सहभागिता र प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसलाई नै निकै राम्रो मान्छन् पौडी पदाधिकारीहरु ।
सन् २००२ पछि पौडीले एसियाडमा भाग लिन लागेको हो । त्यो पनि नेपाली पौडीका लागि थप हौसलाको विषय हो । यसपाली दुई पुरुष शिरिष र मिराज प्रजापति संगै सोफिया शाह र सोनिरा विष्टले भाग लिंदैछन् । शिरिषले ५०, १०० र २०० मिटर फ्रि स्टायलमा भाग लिनेछन् भने सोफिया र मिराजले ५० र १०० मिटर तथा सोनियाले ५० र १०० मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा भाग लिनेछन् ।
टिम मेनेजर नेरश वैद्य भन्छन् – पौडीले आधारभुत सुविधा पाउन सकेपछि यसले प्रगती पक्कै गर्नेछ ।